Azoko apetraka amin'ny solomaso solomaso ny sary famantarana ahy?
Eny, misy ny sary famantarana manokana.
Iza ny rakitra tokony halefako any aminao?
Ny vidin'ny santionany azo averina sa tsia?
Eny, ny habetsaky ny kaomandy farany ambany avy amin'ny tahiry dia 2 · 10pcs.
Inona no tombotsoan'ny solomaso fitaratra？
Ny solomaso misy fitaratra manana fitaratra azo taratra izay mampihena ny habetsaky ny jiro mandalo amin'ny maso.
Inona avy ireo tombo-tsoa azo avy amin'ny solomaso gradient?
Ny lantom-peo masonkoditra dia manjavona amin'ny loko maizimaizina mankany amin'ny loko maivana kokoa, mamela ny xision azo ovaina amin'ny halavirana sy ny jiro.
Ahoana no tokony hikarakarako ny solomaso solomasoko?
Ny fitazonana ny masomaso solomaso ho madio miaraka amin'ny fanampiana azy ireo - ary ianao - mijery tsara sy mahavita tsara. Na izany aza, ny sunglass premium ary indrindra ny solomaso misy azy dia mitaky fitsaboana tsara. Ny fikolokoloana tsy mety dia mety manimba ny lantira, ka miteraka voany na mahasosotra, izay mety hiteraka aretin-tara-maso.
Noho izany, ny fomba tsara indrindra hanadiovana ny solomaso misy anao dia ny fikosehana moramora azy ireo amin'ny lamba fanadiovana solomaso sy ny mpanadio ranoka natao manokana ho an'ny solomaso solomaso, na amin'ny lamba famaohana efa lena mando.
Mba hisorohana ny fahasimbana dia aza diovina amin'ny servieta na akanjo ny solomaso anao, izay afaka mitoto vovoka sy kofehy ho lasa masolavitra ary mamela ratra. Aza atao koa ny mampiasa sabatra na savony ao an-trano. Na dia misy savony malefaka vitsivitsy aza tsy manimba ny masolavitra, ny savony misy hery fanampiny ankehitriny dia matanjaka tsara hanaparitahana moramora ny firakotra. Ny mpanadio fitaratra indrindra dia tena manimba ary mety hanimba haingana ny masonao. Tsy natao hampiasaina amin'ireo fitaovana tsy misy vera ampiasaina amin'ny solomaso izy ireo.
Na dia tsy misy amin'ireo vokatra ireo aza dia mety hanimba eo no ho eo ny sainao, rehefa mandeha ny fotoana ary miverimberina dia ho hita ny fahasimbana.